Frantsa Vao - Wikipedia
I Frantsa Vao (amin'ny fiteny frantsay : Nouvelle-France) dia anarana anononana ireo zanatany frantsay tao Amerika Avaratra nanomboka tamin'ny taonjato faha 17 hatramin'ny taonjato faha 18. Io ilay atao hoe Frantsa Vao io dia nosarahana ho faritra telo.
I Frantsa Vao
Ny faritra Avaratra dia mitondra anarana hoe Akadia ary Kanada (ny zanatan'i Frantsa lehibe indrindra) ; ny teratany frantsay voalohany tao Kanada dia i Jacques Cartier tamin'ny 1534, nifandray tamin'ny foko teratany izy ary nivezivezy tao in-telo ;
Ny faritra atsimo dia mitondra ny anarana hoe Louisiana. Zanatany Frantsay i Louisiana hatramin'ny taona 1813, taona nividianan'i Etazonia an'i Louisiana tamin'i Frantsa.
Tamin'ny fanisana natao voalohany indrindra tao Frantsa Vao tamin'ny 1666, 3 215 no isan'ny mponina miaina ao amin'ny lohasahan'i Saint-Laurent. Zato taona taoriana, sivy alina no isan'ny mponina miaina eraky ny zanatany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Frantsa_Vao&oldid=622850"
Dernière modification le 14 Martsa 2013, à 09:31
Voaova farany tamin'ny 14 Martsa 2013 amin'ny 09:31 ity pejy ity.